512GB storage နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဖန်တီးနေတဲ့ Huawei – DigitalTimes.com.mm
400 Shares 108 Views
512GB storage နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဖန်တီးနေတဲ့ Huawei
နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာပဲ Huawei ရဲ့ P20 စီးရီးတွေကိုမိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်တရုတ်နိုင်ငံမှာသိလိုက်ရတဲ့သတင်းတစ်ခုက Huawei ကနေ ပထမဆုံးအနေနဲ့ 512GB storage နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုထုတ်နေတယ်ဆိုတဲံသတင်းပါ။ P20 ဖုန်းတွေထဲက တစ်လုံးလုံးပဲဖြစ်မလား နောက်ထပ်ဗားရှင်းတစ်ခုခုလားဆိုတာတော့ မသဲကွဲသေးပါဘူုး။
TENAA မှာစာရင်းဝင်နေတာကတော့ မော်ဒယ်လ်နံပါတ် NEO-AL00 နဲ့ “6GB RAM+ 512GB ROM” ဆိုပြီး အောက်ဆုံးတန်းက မမ်မိုရီဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့ရမှာပါ (အောက်မှာပုံပြထားပါတယ်။)
storage ပိုင်းမှာတော့ Huawei က လုပ်ငန်းသုံး data-storage တွေရှိပေမယ့် မိုဘိုင်း storage ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာတော့ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး 512GB memory chip တွေကိုဖန်တီးနိုင်လောက်အောင် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဆိုတာလည်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီတိုင်းဆိုရင် NEO-AL00 ဖုန်းမော်ဒယ်လ်မှာ Samsung ရဲ့ storage 512GB ကိုသုံးမလား? ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိထုတ်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီးမကြာခင်ပဲမိတ်ဆက်တော့မှာမို့လို့လားဆိုတာတော့ ခန့်မှန်းရုံပဲရှိပါသေးတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိတော့ 256GB ထိပေးထားတဲ့ Huawei ဖုန်းဆိုလို့ Mate9Porsche Design နဲ့ Mate 10 Porsche Design ဆိုတဲ့၂လုံးပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါဆို 512GB ထိပေးထားမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးက နောက်ထပ် Porsche edition ဖုန်းတစ်လုံးများဖြစ်လေမလား???
နောကျတဈပတျထဲမှာပဲ Huawei ရဲ့ P20 စီးရီးတှကေိုမိတျဆကျတော့မှာဖွဈပွီး နောကျထပျတရုတျနိုငျငံမှာသိလိုကျရတဲ့သတငျးတဈခုက Huawei ကနေ ပထမဆုံးအနနေဲ့ 512GB storage နဲ့ဖုနျးတဈလုံးကိုထုတျနတေယျဆိုတဲံသတငျးပါ။ P20 ဖုနျးတှထေဲက တဈလုံးလုံးပဲဖွဈမလား နောကျထပျဗားရှငျးတဈခုခုလားဆိုတာတော့ မသဲကှဲသေးပါဘူုး။
TENAA မှာစာရငျးဝငျနတောကတော့ မျောဒယျလျနံပါတျ NEO-AL00 နဲ့ “6GB RAM+ 512GB ROM” ဆိုပွီး အောကျဆုံးတနျးက မမျမိုရီဆိုတဲ့နရောမှာတှရေ့မှာပါ (အောကျမှာပုံပွထားပါတယျ။)
storage ပိုငျးမှာတော့ Huawei က လုပျငနျးသုံး data-storage တှရှေိပမေယျ့ မိုဘိုငျး storage ထုတျလုပျမှုပိုငျးမှာတော့ လိုအပျခကျြတှရှေိနပေါသေးတယျ။ နောကျပွီး 512GB memory chip တှကေိုဖနျတီးနိုငျလောကျအောငျ ကိုယျပိုငျနညျးပညာဆိုတာလညျး မရှိသေးပါဘူး။ ဒီတိုငျးဆိုရငျ NEO-AL00 ဖုနျးမျောဒယျလျမှာ Samsung ရဲ့ storage 512GB ကိုသုံးမလား? ဒါမှမဟုတျ လကျရှိထုတျလုပျဆဲဖွဈပွီးမကွာခငျပဲမိတျဆကျတော့မှာမို့လို့လားဆိုတာတော့ ခနျ့မှနျးရုံပဲရှိပါသေးတယျ။
လကျရှိအခြိနျထိတော့ 256GB ထိပေးထားတဲ့ Huawei ဖုနျးဆိုလို့ Mate9Porsche Design နဲ့ Mate 10 Porsche Design ဆိုတဲ့၂လုံးပဲရှိပါသေးတယျ။ ဒါဆို 512GB ထိပေးထားမယျ့ဖုနျးတဈလုံးက နောကျထပျ Porsche edition ဖုနျးတဈလုံးမြားဖွဈလမေလား???
MicroLED ဆိုတာဘာလဲ? Apple က ဒီနည်းပညာကိုသုံးချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက?